Ifulethi elihle elinethezekile elinethala
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Bruno
Ifulethi lethu elihle eliphambi kolwandle litholakala egqumeni laseDiabat elinethala elihle elibheke inkundla yegalofu kanye ne-Essaouira Bay.
Ifulethi lihlanganisa ikamelo lokulala elinombhede omkhulu ophindwe kabili + igumbi lokugezela elikhulu elineshawa, indlu yangasese nomshini wokuwasha + igumbi lokuphumula elikhulu elinekhishi elihlome ngokuphelele, isitofu esishisayo, i-oven, i-microwave, ifriji, umshini wokugeza izitsha + indawo yokuhlala ene-satellite TV, Isidlali seDVD, i-wifi.
I-Ocean front terrace enokubukwa okuhle kwenkundla yegalofu kanye nehlathi likagamthilini.
4.85 ·97 okushiwo abanye
Ifulethi litholakala esifundeni saseDiabat esiseningizimu yedolobha ku-2 km ukusuka e-medina ngakho imizuzu emi-5 ngemoto.Indawo ithule kakhulu futhi iphumule futhi kunezitolo ezinkulu ezi-2 kanye nekhefi encane / indawo yokudlela eduzane.Imvelo ezungezile inothile futhi ihlukahlukene ngokuhamba okuhle eduze komfula ogeleza echwebeni elinensimu enhle yezindunduma namabhishi angapheli.
Ngihlela ukushintshana nezivakashi zami
UBruno Ungumbungazi ovelele